mayhninsi – MBC
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇-၁၈)ရက်၊ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် (၁၂၄)ကြိမ်‌မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သော ဦးဆောင်သူများ ဥက္ကဌ Rev. Dr. စောဆမ်ဆန် ဒုဥက္ကဌ Rev. စောစမ်စန်၊ Rev. Dr. အေးနွယ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ထန်ကျင့်လျန်း တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. […]
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၏ (၁၂၄)ကြိမ်‌မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၇-၁၈)ရက်နေ့များတွင် နံနက်(၈း၀၀)နာရီမှ ညနေ (၅း၀၀)နာရီ အထိ Zoom Application ဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ တက်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း (၆၀၀)ဦးခန့် ရှိပြီး၊ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌများဖြစ်ကြသော Rev. Dr. မောင်မောင်ရင်၊ […]
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် အုပ်ချုပ် စီမံရေး အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၀-၁၁)ရက်နေ့များတွင် နံနက်(၈း၀၀)နာရီမှ ညနေ (၅း၀၀)နာရီ အထိ Zoom Application ဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ တက်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း (၂၄၂)ဦး ရှိပြီး၊ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌများဖြစ်ကြသော Rev. Dr. […]
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်နေ့အထိ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်ကို အရောင်းဆိုင်များအပါအဝင် ခရစ်စမတ်ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါပြီး၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် နံနက် (၉း၀၀)နာရီတွင် နှစ်သစ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၉း၀၀)နာရီတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် အနားယူမည့် […]